တောအလုပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တောအလုပ်
Posted by တောတွင်းပျော် on Jun 15, 2017 in Creative Writing | 27 comments
လွန်ခဲ့ တဲ့အနှစ် ၂၀ လောက်က ဒီဖက်တွေမှာ
အဲတုန်းက ဒီဒေသက တောင်များများဟာ တောင်ကတုံးလိုဖြစ်နေတာ။
တောဖက်က ပြန်ထိန်းသိမ်းထားလို့ 
ုအလေးအပင်ဆွဲနိုင်တာက ဆင်တွေ ကျွဲတွေ လောက်ပဲ
တောအလုပ်က သက်သာတယ်ဆိုတာကတစ်နေရာမှ မရှိ။
ရုက္ခစိုးတွေ ဘုံပျောက်အောင် လုပ်နေတာကိုး…
“ကြွက်ကြီး” တွေကတော့ သစ်ဆွဲပြီး ချောင်းထဲမှာ Sauna … ဇိမ်ပဲ
ဝမ်းဆာငြိမ်းအောင် အရင်ပူရသကိုး …?
ဘုရားမပွင့်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၃၀၀၀ ကတည်းက.. ပေါက်နေတဲ့အပင်တွေ ရာထောင်ချီရှိတဲ့.. အမေရိကရဲ့ အမျိုးသားသစ်တောတွေသတိရမိ…။
.. အဲဒီအပင်တွေလာကြည့်တဲ့ လူတွေ တနှစ်တနှစ် သန်းဂဏန်းနဲ့တင် သစ်ပင်ပြစား ၀င်ငွေရနေတာလေ..။
မြန်မာတွေလည်းလုပ်တတ်ရင်.. “ဆင်နှင့်.. သစ်ပင်ခုတ်ဖြုန်းနည်း တိုးရစ်ဇင်” ဆိုပြီး.. လမ်းကြောင်းသစ်ဖွင့်သင့်တယ်..။
ဒါမျိုးများများပြောပါခင်ဗျ….ကချင်တွေခင်ဗျာ ..ခုတ်လဲမခုတ်ရပဲ ..နာမည်ပျက်လွန်းလို့ ….ဆိုပါစို့…ကချင်အမြဲစိမ်းတောတွေထဲမှာ တဲတွေထိုး..အပင်ကြည့် ..ဌက်ကြည့်..လိပ်ပြာကြည့် …သစ်ခွကြည့် ..စသဖြင့် .။ ရေမဆေးကျောက်ရှာတဲ့ .. ကံစမ်းခရီးစဉ်မျိုး..စသဖြင့်…..adventure ရော Eco တိုးရော culture တိုးရောလုပ်နိုင်တဲ့ …ကချင်ထွားဘဲ အိတ်စပတ်တွေမှများကြီး…. ခက်တာက ငွေတကယ်ဝင်နိုင်မယ့် အပေါက်အလမ်းကို ဇင်ဘာဘွေစစ်တပ်မသိ…. လုံးလုံးကိုမသိ….
” ကချင်ထွားဘဲ အိတ်စပတ်တွေ ”
ဟင်း ဟင်း ဟင်း ၊ သိပါ့ သိပါ့ ၊
အဲ့ဒီ ကချင်ထွားဘဲ အိတ်စပတ်တွေထဲက တစ်ယောက်ကို ၊ သိပါ့ ။
အင်းပေါ့…။ ကချင်ပြည်နယ်ထဲ.. အရပ်လေးပေလောက်ရှိတဲ့.. လူနီလေးတွေရှိတယ်ကြားဖူးတယ်..။
သူတို့အကြောင်းသာ အမေရိကားတီဗီပေါ်.. ဒေါ်လာ ၁သိန်းအကုန်ခံပြီး.. ကြော်ငြာတင်လိုက်…။
တနှစ်ဒေါ်လာ ၁၀သန်းရမယ်အာမခံကြောင်း… လို့စ်.။
ဒီလူမျိုးတွေကိုပြောတယ်ထင်ပါ့ …သူကြီး ..မကြာတော့တဲ့တနေ့တော့ လုပ်နိုင်ကောင်းရဲ့ဗျာ …ခုတော့ ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမယ်မှန်းမသိ…..Nat Geo ကလူတွေတစ်ခါမေးဖူးတယ်..သို့သော် လုံခြုံရေးကိုမည်သူကမှ အာမမခံနိုင်…ဆိုတော့ကာ…ကျော်တို့များကြီးကြိုးစားရအုံးမယ်…
ဦးတေဇ စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ တစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့သလားလို့…
ရွာလိုက်တော့ကျန်သေးတယ်ခင်ဗျ..ရာလောက်ပဲ…မများလှတော့တဲ့ လူဦးရေဖြစ်နေပါပြီ …တချို့လဲ သွေးနှောရင်းနဲ့ ရှည်ကုန်ပြီခင်ဗျ….ပါဝါရိန်းဂျားအထူးတပ်တွေနဲ့နီးတဲ့နေရာတ၀ိုက်တော့ စောင့်ရှောက်ထားတာရှိသေးတယ်…အစ်ကိုရေ …
ခု ပြထားတဲ့ပုံမှာတွေက စီးပွားဖြစ် အကြီးအကျယ်
တစ်ချို့ က အပိုငွေနည်းနည်းပါးပါးရအောင် အပြင်ထုတ်ရောင်းဖို့ လောက်သာ
အောက်ဆုံးပုံထဲက ခါးထောက်ပြီး ဟိုဘက်လှည့်နေတာ
ပုံထဲ ပါ ပါ့ မလား
ရွာထဲမ​ရောက်​တာ၂ပတ်​​လောက်​မှာ Post ​တွေအများကြီးတက်​​နေတာဘဲ။တဝကြီးဖတ်​လိုက်​အုံးမယ်​။ မ​တွေ့တာကြာ တဲ့လူ​တွေရဲ့ ကွန်​မန့်​​တွေလဲ​တွေ့ရတယ်​ ကို​တော​ပျော်​​ရေ့။ ဒါထက်​​အောက်​ဆုံးပုံက သစ်​ခိုးတဲ့ ပုံမျိုးပါလား။ တရားဝင်​သစ်​က ဒီလိုပါးပုတ်​ပြီး မသယ်​ဘူးထင်​တယ်​။
တရားဝင်တော့မဟုတ်ပေမယ့် 
ခိုးထုတ်တာတော့မဟုတ်။
ဒီဒေသက အစိုးရရဲ့သြဇာသက်ရောက်တဲ့နယ်မြေထဲကမဟူတ်ပါဘူး။
သစ်အများစုက သစ်စက်မရောက်ခင်မှာသာ တရားမဝင်ပါ။
သစ်စက်ရောက် ခွဲသားဖြစ်သွားပြီးရင် …
တောကောင်ခိုးပစ်လို့ရလား ဟေးဟေး :mrgreenn:
ဒေသဓလေ့ အတိုင်း တောပုန်းတွေကိုင်နေကြတာပဲ။
ဒီဆင်လေးကိုမြင်တော့ ဟိုိတစ်နေ့ကဖတ်လိုက်ရတဲ့ တောထဲမှာသေနေတဲ့ဆင်လေးကိုပြေးသတိရမိတယ်
ဟိုတုန်းက ကြားဖူးတာ ဆင်နဲ့သစ်ဆွဲတာတွေ ကျွဲနဲ့ ဆွဲတာတွေ
အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မမြင်ခဲ့ ဖူးဘူး။
ခုလိုမြင်ရတာတွေ မမြင်ဖူးတဲ့ လူတွေ မြင်ဖူးရအောင်လို့ 
ကြားမိတာတော့ သစ်ခုတ်ခွင့်တွေ ပိတ်လိုက်လို့.. ဆင်တွေ အလုပ်မရှိတော့ဘဲ ဆင်စခန်းတွေ ဖွင့်နေရတယ်ဆို…
တောလမ်းလေးမြင်တော့ သံတောင်ကြီးကို သွားလည်ဖူးတာ သတိရမိတယ်.. ထပ်သွားလည်ချင်သေးတယ်..
အမေရိကားမှာလည်း.. ဆပ်ကပ်တွေပိတ်ကုန်လို့.. တိရိစ္ဆာန်တွေ ဒုက္ခများနေသတဲ့..။
မွေးကတည်းက.. လူတွေကြားနေလာသမို့…. တောထဲလည်းမဖြစ်..။ အဲ.. အရိုင်းတွေသဘာဝအတိုင်းနေနိုင်တဲ့.. တော ဆိုတာကလည်း မရှိတော့…။
မြန်မာပြည်ကတော့ ဆင်အတွက်လွယ်မှာပါ..။ ထိုင်းကလုပ်သလို.. တိုရစ်တွေ.. တောထဲတိုးဖို့.. ဆင်ကို..သုံးပေါ့…။
ခုချိန် ကရင်ဖက်ကလည်း ပိတ်ထားတယ်။
ခုလိုမျိုးနည်းနည်းပါးပါးတော့ဒေသနားလည်မှုနဲ့ လုပ်နေတာ။
လုံးဝတင်းကျပ်ပြီး ပိတ်လိုက်ရင်လည်း ဒေသခံတွေ အရမ်းခက်ခဲသွားမယ်။
ဒီဒေသအကြောင်း post ကို ပြန် edit လုပ်ပြီး နည်းနည်းပြန်ရေး
မဲင်းတျဲင် ခေါ် မြန်ကျန့်အတွင်းထဲမှာပါ။
မလေးမှာက ဘူဒိုဇာတွေ log fisher တွေနဲ့ ဆွဲတာ